Esi lelee Disney + na TV 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Disney + malitere site na nnukwu ihe ịga nke ọma ọha na eze na Italytali, ebe ọ bụ na ọ na-agwakọta katuunu kachasị mma maka ụmụaka (site na nnukwu klas ochie na ihe ọhụrụ Pixar) yana usoro TV pụrụ iche dabere na ụwa nke Star Wars, na-echefughi ihe niile Iju ihe nkiri. N'agbanyeghị oke asọmpi sitere na Netflix na Amazon Prime Video, ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ idebe Disney + dị ka ihe na-achọ ndenye aha maka ezinụlọ dum, nyekwara ọnụahịa asọmpi (nke dị ugbu a .6,99 69,99 kwa ọnwa ma ọ bụ ndebanye aha kwa afọ maka XNUMX, XNUMX).
Ọ bụrụ na ruo ugbu a, anyị ejirila naanị anyị lelee ọdịnaya Disney + site na PC ma ọ bụ site na mbadamba, anyị nwere ozi dị mma maka gị: anyị nwere ike melite Disney + na TV ọ bụlaMa ọ bụ Smart TV ma ọ bụ TV dị larịị dị mfe (ọ bụrụhaala na ọ nwere ọdụ HDMI). Yabụ, ka anyị lee ọnụ otu esi ekiri Disney + na TV, iji mee ụmụ na nne na nna nwere mmasị na ọdịnaya tozuru etozu nke ikpo okwu a.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Disney Plus ma ọ bụ Netflix? Ihe ka mma na esemokwu
Lelee Disney + na TV
Ngwa Disney + dị na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe eji atụrụ ndụ, dị ka Smart TV na ngwaọrụ nwere njikọ HDMI, na ohere nke jikwa ohere nke 4K UHD na ọdịnaya HDR dị elu (ma ọ bụrụ na ọnọdụ nke netwọk na ngwaọrụ eji mee ya). Ọ bụrụ na anyị enweghị akaụntụ Disney +, ọ ka mma ịnweta otu tupu ị gụọ aro ndị dị na isi akwụkwọ ntuziaka a; Iji debanye aha akaụntụ ọhụrụ, gaa na saịtị ndebanye aha gọọmentị, tinye adreesị ozi-e dị irè ma soro ntuziaka ndị enyere na ihuenyo.
Ọ bụrụ na anyị nwere otu Na-adịbeghị anya Smart TV (LG, Samsung ma ọ bụ gam akporo TV) anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya Disney + site na ịnweta ụlọ ahịa ngwa ma chọọ ngwa ahụ Disney +.
Mgbe ị wụnye ngwa ahụ, pịa bọtịnụ na ntanetị iji mepee akụkụ Smart, pịa ngwa Disney + ma banye na nzere anyị nwere. Site na Smart TV anyị nwere ike irite uru na ọdịnaya niile dị na ogo kachasị elu, na-erite uru (ọ bụrụ na telivishọn dakọtara) yana ultra elu definition 4K UHD na HDR; Iji nweta ogo kachasị elu, achọrọ njikọ intaneti dị oke ọsọ (opekata mpe 25 Mbps na nbudata), ma ọ bụghị na a ga-egwu ọdịnaya ahụ na ogo dị mma (1080p ma ọ bụ karịa obere). Maka ozi ndị ọzọ, anyị na-akwado ịgụ akwụkwọ ndu anyị. Otu esi ejikọ Smart TV na Internetntanetị.
Disney + na egwuregwu egwuregwu
Ọ bụrụ na anyị jikọọ njikwa egwuregwu na nso nso a (PS4, Xbox One, PS5 ma ọ bụ Xbox Series X / S.), anyị nwere ike iji ya lee ihe anya Disney + na nkwụsịtụ n'etiti oge egwuregwu na nke ọzọ, na-erite uru site n'otu ụdị anyị ga-enweta na Smart TV.
Site na njikwa nke ejikọrọ na TV site na HDMI, anyị nwere ike ịlele ọdịnaya Disney + site na ịkpọga anyị na bọọdụ njikwa (site na ịpị bọtịnụ PS ma ọ bụ bọtịnụ XBox), mepee ngalaba ahụ Ngwa O Aplicaciones na imeghe ngwa Disney +, dị ugbu a na ndabara na consoles niile a kpọtụrụ aha. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta ngwa arụnyere, naanị ihe anyị ga-eme bụ imepe ụlọ egwu ma ọ bụ bọtịnụ ọchụchọ ma chọọ ngwa ahụ. Disney + n'etiti ndị dị. Ọbụna na consoles ọ ga-ekwe omume iji 4K UHD na HDR (ọ bụrụ na TV dakọtara), mana naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere nsụgharị kachasị ike nke njikwa ndị a na-ere ugbu a (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 na Xbox Series X / S) .
Disney + ọkụ ọkụ TV gị
Ọ bụrụ na anyị enweghị Smart TV ma ọ bụ ngwa a raara nye adịghị, anyị nwere ike idozi ya ngwa ngwa site na ijikọ ya dongle Fire TV Stick, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 30.
Mgbe ijikọ Fire TV na TV (ịgbaso ntuziaka ndị a hụrụ na anyị raara onwe ya nye ndu), họrọ ziri ezi isi iyi na TV, imeghe ngalaba Aplicaciones, anyị na-achọ Disney + n'etiti ndị nọ na ndabara ma banye. Fire TV Stick mgbe niile na ngwaọrụ Lite na-akwado ọdịnaya dị mma (1080p ma ọ bụ ala); ọ bụrụ na anyị chọrọ ọdịnaya Disney + na 4K UHD anyị ga-elekwasị anya Fire TV Stick 4K Ultra HD, dị na Amazon na ọnụahịa dị elu (€ 60).
Disney + gị Chromecast
Ngwaọrụ nnyefe ama ama ama ama nwere ugbu a na ụlọ ọ bụla Google Chromecast, dị na saịtị Google.
Mgbe ejikọtara HDMI dongle na TV na Wi-Fi n'ụlọ, anyị na-emeghe ngwa Disney + na ama ma ọ bụ mbadamba (anyị na-echetara gị na ngwa dị maka gam akporo na iPhone / iPad), anyị abanye na nzere ọrụ, anyị na-ahọrọ ọdịnaya iji mepụtaghachi ya, ozugbo ọ dị, anyị na-pịa bọtịnụ dị n'elu Ibu, iji strimụ vidiyo na TV site na Chromecast.
Disney + gị Apple TV
Oburu na anyi so na ndi obi oma ndị nwe Apple TV n'ime ụlọ, anyị nwere ike iji ya na-ekiri Disney + na ogo kacha mma.
Iji jiri Disney + na ngwa ụlọ ime ụlọ Apple, gbanye ya, gaa na ngalaba sistemụ, pịa ngwa Disney + ma tinye nzere nnweta; ma ọ bụrụ na ngwa adịghị, anyị na-emeghe raara onwe ya nye App Store, search Disney + ma wụnye ya na ngwaọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na Apple TV maka ọrịre na-akwado 4K UHD e l'HDR Na ya, ọ ga-ekwe omume iji lee ọdịnaya Disney + anya kachasị mma, ọ bụrụhaala na telivishọn kwekọrọ na teknụzụ ndị a ma ọ bụrụ na anyị nwere ọnụọgụ Internetntanetị ngwa ngwa (dị ka ekwuru, achọrọ nbudata 25 Mbps).
Na-eweta Disney + na telivishọn anyị bụ ihe achọrọ ka ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ọrụ iyi a, ebe ọ bụ na kachasị mma dị naanị site na ịhazi ngwa na Smart TV ma ọ bụ jiri otu ụzọ ndị ọzọ akọwapụtara na ntuziaka a. Maka ndị ọrụ niile nwere TV dị mfe nke na-enweghị ọrụ ọfụma naanị nweta Fire TV Stick ma ọ bụ Chromecast iji nweta ọdịnaya Disney + ngwa ngwa na mfe.
Ọ bụrụ na anyị bụ nnukwu Fans nke ultra elu definition ọdịnaya, ị ga-enwe obi ụtọ ịnọgide na-agụ isiokwu anyị Etu esi eji 4K na Smart TV mi Wayszọ niile iji lelee Netflix na 4K UHD. Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, anyị na-achọ ọrụ ndị ọzọ iji lelee katuunu na-asọ asọ na TV, naanị na-agụ akwụkwọ ndu anyị. Ekiri gụgharia katuunu na ịntanetị, saịtị na ngwa ọdịnala n'efu.
A ga-emecha nyocha ọgụgụ isi nke Japan na nkeji iri na ise